Pvc Wedzerai, PVC Heat Stabilizer, PVC Stabilizer - Aimsea
Aimsea Yakavambwa muna 1997 ine yakanyoreswa guta remamiriyoni makumi maviri emamiriyoni emamiriyoni. Iyo yenyika yepamusorosoro bhizinesi rinotungamira mukubatanidzwa kwekutsvaga, kugadzirwa uye kutengesa kweasina-chepfu zvakatipoteredza zvine hushamwari PVC zvinodzora. Iwo ekudzikamisa anoshandiswa zvakanyanya muzvigadzirwa zvePVV, senge waya netambo, zvekushandisa zvekurapa zvekutambisa, zvigadzirwa zviri pachena, zvigadzirwa zvecalendered, zvigadzirwa zvepaipi, machira ekushongedza, shangu dzakapupuma, musuo uye mawindow emawindo, nezvimwe. Zvigadzirwa zvikuru hazvina chepfu uye nharaunda. ane hushamwari PVC calcium-zinc inogadzikana. Iine gumi nematanhatu ekugadzira patent uye anodarika makumi matatu maitiro ekushandisa Iri padanho repasi rose rinotungamira yehunyanzvi hwepfuma yezvivakwa. Yakashongedzerwa nekutsvaga kwesainzi uye timu yehunyanzvi, yepasi rose R&D uye yekugadzira nzvimbo, ine yakazvimirira mitsva uye kukwikwidza, yakazara zvoga kugadzirwa mutsetse, wepagore kugona kugona emakumi mana ematani matani, epamusoro mhando yekutengesa indasitiri, yakashanda kupfuura vatengi ve500 yakazara zvakatipoteredza zvine hushamwari PVC mapurasitiki mhinduro .
Makore 23 ruzivo
Vanopfuura makumi matatu patent mafomu
Capital ye20 mamirioni yuan
Asina-chepfu ekudzikamisa ekurapa michina yakajeka yakajeka tube injector
Isina-Inotyisa Stabilizer YeEdge Trim Yakapfava Uye Flexible PVC Gaskets
rimwe pakiti rinodzikamisa
yemapaipi & fittings
PVC stabilizer mbishi bonde ...
Tsananguro yechigadzirwa Iyo plasticizer inosanganisirwa muPV matrix inowedzera kuchinjika kwayo kune chero chero chinhanho chinodiwa uye inowedzera kuwedzera chiyero chekushandisa kwePlasticized PVC. Inonyanya kushandiswa kune machubhu (chikafu, kurapwa), Hoses (kumanikidza, gadheni, pombi), gaskets, swing madhoo uye handrails. Iwo maStabilizers ane kudziya kwakanyanya kupisa, hwema hwakadzika, yakanakisa yemukati yemhepo mhando, kuenderana kwakanaka nemapurasitiki. Zvakanakira Sangana nenyika yekurapa GB15593-1995 standard; Yakapfuura ...
Inotyisa yemahara inogadzirisa ...
Chigadzirwa Chigadzirwa Kunze kwePVC mafirimu akaomarara, kune zvakare hukuru hukuru hwekushandisa kweCaZn Stabilizer yakagadziriswa inoshanduka PVC mafirimu. Musika uyu unotungamirwa nemafirimu epurasitiki, kunyange hazvo mafirimu asingachinjiki epurasitiki ari kupinda mumusika. Iyi firimu inochinjika inoshandiswa zvakanyanya mu lamination mafirimu, emahwindo ekuputira mafirimu, yekuzvinamatira firimu, kushambadzira firimu, shrink mafirimu, mota kuputira mafirimu, anodhinda mafirimu, traffic chiratidzo mafirimu, toy mudziyo mafirimu, zvekurapa mafirimu, tafura jira ...
Chigadzirwa Chigadzirwa Kwemakumi emakore, Zvigadzirwa zvePVC zvakajeka zvakapatsanurwa kuita zvakaomarara uye zvinoshanduka, izvo zvakashandiswa mukushandisa kwakasiyana. Zvinoenderana nehurukuro dzazvino nezve kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza nekusimudzira, zvikamu zvemusika zvenguva yemberi zvichasangana nematambudziko akakura. Tin-ine zvigadzirwa, zvinotsiva kune-isina-mhinduro mhinduro zvinowedzera kuwedzera kutsoropodza. Panyaya iyi, zvakakosha kuti utarise kune akasiyana emutemo mirau, senge pharmacopoeia, chikafu conta ...
Imwe paki kupisa kupisa Kudzikamisa ...
Product Description Uye zvakare, inoshandiswa kumatoyi, magajeti, akamira, zvipoda, maturusi, zvinhu zvekudya, kushongedza, zvekuvaka uye maindasitiri akasiyana siyana kurongedza chinangwa. Aya mafirimu ari kunyanya kugadzira kubva kuCa / Zn PVC Stabilizers sezvo yagara kwenguva refu, yakasimba tensile simba, hunyoro chiratidzo, kubvarura kuramba, kwete ...
Calcium Zinc PVC kupisa ...
Chigadzirwa Tsananguro PVC yakadzurwa mapaipi uye ...
PVC Stabilizers kuti CA ...
Chigadzirwa Tsanangudzo PVC inogadzirisa inogadzira ...
Kupisa Stabilizer yePV ...
Chigadzirwa Tsananguro Calcium Zinc kupisa Stab ...
PVC Stabilizer yeIrr ...
Chigadzirwa Tsananguro Yedu Calcium Zinc PVC S ...
Chigadzirwa Tsanangudzo PVC Stabilizer / kupisa st ...
PVC Stabilizer nokuti Wat ...
Chigadzirwa Tsananguro Calcium Zinc Dzikamisa ...
Yakakwira mhando PVC Stabi ...
Chigadzirwa Tsanangudzo Flexible vinyl ndeye ...
Yakanakisa PVC stabilizer fo ...
PVC Isina-Inotyisa Stabilizer
PVC isina-chepfu inosimudzira ndiyo yazvino yepamusoro-inoshanda, yakakwira-yakajeka isinga-chepfu zinc-based PVC kupisa stabilizer kunoitwa nesainzi kusanganisa isiri-chepfu zinc macomputer uye akakosha ma synergists. Iyo yakareba-refu kupisa inodzikamisa yePVC isiri-chepfu inosimudzira ine yakanakisa mashandiro, uye iyo combina ...
Zvakanakira Ca Zn Stabilizer
Parizvino, PVC kupisa inodzikamisa inonyanya kusanganisira lead salts, inoumbwa calcium uye zinc, organic tin, organic antimony, organic yekubatsira yekupisa inogadzirisa uye isingawanzo epasi makomponi. Iyo hombe kuburitsa ndeye yechinyakare inotungamira munyu inogadzikana uye Ca Zn inosanganiswa inosimbisa. Ca Zn inosimudza yakasvibira ...
PVC Kupisa Kunodzikamisa Flexbile, Pvc Heat Inodzikamisa, Pvc Imwe Pack Inodzikamisa, PVC yokuvirisa, PVC Stabilizer, PVC Isina-Inotyisa Stabilizer,